समिक्षाकाे कडीमा वर्ष २०७५ – दाङ खबर
समिक्षाकाे कडीमा वर्ष २०७५
काठमाडौँ, चैत ३० । बितेका ३६३ दिन शिक्षा क्षेत्र नीति निर्माणमै अलमलिन प¥यो । नीति निर्माण र योजनाको यात्रा निरन्तर रहिरह्यो, तर लक्ष्यसम्म खासै पुग्न सकेन । शिक्षा क्षेत्रले थुप्रै अधुरा काम छाडेर २०७५ साललाई बिदा गर्दैछ ।
यस वर्ष शिक्षाका थुप्रै नीति र योजना बनाइए । ती खासै कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । कार्यान्वयनमा आइदिएका भए शिक्षामा देखिने परिवर्तन हुने थियो । केही महत्वपूर्ण कार्य भए, केही अपुरा नै रहे । तसर्थ यस वर्षलाई सफलता र असफलताको मिश्रित बिन्दुमा शिक्षा क्षेत्र रह्यो भन्न सकिन्छ ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. वासुदेव काफ्लेले यस वर्ष शिक्षामा तहलका मच्चाउनेभन्दा पनि अन्योल बढी देखिएको बताउँदै भन्नुभयो, “शिक्षामा धेरै काम भए, तर स्पष्टताको समस्या रह्यो । शिक्षाका अन्योल र समस्यालाई प्रष्ट नगर्दै एक वर्ष वित्यो ।” नयाँ नामबाट शिक्षा निकाय सञ्चालन भए । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएपछि बल्ल सबै स्थानीय तहले कर्मचारी प्राप्त गरेका छन् । स्थानीय तहले कुन गतिका साथ शिक्षालाई अगाडि कुदाउने छन् भन्ने आगामी २०७६ साल पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन र त्यसको प्रतिवेदन यस वर्षको महत्वपूर्ण कार्य थियो । आयोगको सिफारिसअनुसार मुलुकको नयाँ शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्नेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिमरुप प्रदान गर्न सकेको छैन । आयोगको सिफारिसकै आधारमा सङ्घीय शिक्षा ऐन तयार भई कार्यान्वयनमा आइसक्नु पर्नेमा मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा थन्किन पुगेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनु यस वर्षको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन ल्याउनुलाई पनि सफलताका रुपमा लिन सकिन्छ, तर त्यसको देखिने गरी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यस वर्ष निजी विद्यालयलाई बन्द गर्नुपर्दछ भन्ने चर्चाले निकै तरङ्ग सिर्जना ग¥यो । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का सहअध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले निजी विद्यालयलाई सामुदायीकरण गर्ने हल्लाले हजारौँ विद्यार्थी विदेशिएको दावी गर्दै भन्नुभयो, “२०७५ सालमा निजी विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बृद्धि भएको छ । सरकारी शिक्षामा गुणस्तरले प्राथमिकता पाउन सकेन ।”
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाँच वर्षे मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै सङ्घीय व्यवस्था अनुकूल शिक्षा नीति निर्माण छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लगायतका लक्ष्य अगाडि सार्नुभएको थियो, तर त्यो पनि सफल हुन सकेन । सामुदायिक विद्यालयले नयाँ स्थायी शिक्षक पाउनुलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ ।
विद्यालय तहको नयाँ पाठ्यक्रम संरचना स्वीकृत भई यसै वर्षबाट नमूनाका रुपमा नयाँ पाठ्यक्रमअनुरुपका पाठ्यपुस्तक एक सय विद्यालयमा परीक्षण गर्ने योजनाले पनि सफलता पाउन सकेन । नयाँ वर्षबाट कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीले रङ्गीन पाठ्यपुस्तक पाउने छन् । विद्यालय बाहिर रहेका तीन लाख १३ हजारमध्ये दुई लाख ५४ हजार बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउने काम भएको थियो ।
चार वर्षअघि भत्किएका थुप्रै विद्यालयले यस वर्ष पनि नयाँ भवन प्राप्त गर्न सकेन । वर्ष सकिने बेला अत्याधुनिक सूचना प्रविधि प्रयोगशाला प्राप्त गर्ने सामुदायिक विद्यालयको छनोट भएको छ । आगामी १५ औँ आवधिक योजनाको आधारपत्रको मस्यौदा तयार भएको छ । प्रदेश २ मा एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र सार्वजनिक हुँदा पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्नुप¥यो, जुन घटना शिक्षा क्षेत्रका लागि नमेटिने दाग बन्न पुग्यो ।
शिक्षाका योजना र कामकारवाही कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच ठ्याम्मै समन्वय हुन सकेन । “शिक्षाका सन्दर्भमा राज्यका तीन तहको भूमिका प्रष्ट हुन नपाउँदै एक वर्ष बित्नुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन” शिक्षाविद् डा. काफ्लेले भन्नुभयो ।
शिक्षा आयोगका सदस्यसमेतको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका शिक्षाविद् प्राडा टङ्कनाथ शर्माले आयोगले शिक्षाको सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गरिदिएको र अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरोकारवाला निकाय लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । “यो वर्ष शिक्षाको नयाँ ऐन पनि आएन । गुणस्तरमा त्यति ध्यान पुग्न सकेन” उहाँले थप्नुभयो, “यो वर्ष सामान्य बित्यो । आगामी वर्ष योग्य शिक्षक नियुक्तिदेखि परीक्षा प्रणाली सुधारसम्ममा ध्यान दिनुपर्नेछ । आगामी २०७६ साल शिक्षकका लागि सुखद् रहनेछ भन्ने आशा गरौँ ।”
Prevकार दुर्घटनामा मृतकको संख्या चार पुग्यो
Nextकांग्रेसको वर्ष २०७५
सेफ्टी ट्यांकी सफा गर्ने क्रममा निस्सासिएर दुईको मृत्यु
आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको टेबलटेनिसमा श्यान्टु र नविता सिंगल्स च्याम्पियन